Naya course » कहिले बन्छ सवस्टेशन ? कहिले बन्छ सवस्टेशन ? – Naya course
कहिले बन्छ सवस्टेशन ?
जाजरकोट / सुर्खेतको सुव्वाकुनामा १३२ केभी प्रसारण लाइनको सवस्टेशन निर्माण नहुँदा तीन जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिँदै आएको छ । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइनको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पूरा गरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । सुर्खेतको आधा, सल्यानको आधा भाग र रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका लागि सुर्खेतको सुब्बाकुनामा सवस्टेशन निर्माण नहुँदा विद्युत् नियमित आपूर्तिमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
अहिले सुर्खेतको सुव्वाकुना र जहरेमा ठूला सवस्टेशन निर्माण नभएकाले जाजरकोट, सुर्खेतको केही भाग, रुकुमपश्चिम र सल्यानको केही भागमा ३३ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यस्तै जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा ४०० केभी प्रसारण लाइनको सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा भएको छ । कोभिड कम हुने वित्तिकै डिपीआरका लागि दशैं सम्म कन्सलटेण्ट आउने बताइएको छ ।
प्रदेशलेनै जाजरकोटको चौखा सवस्टेशन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको काम सम्पन्न गरेको प्रमुख अग्रहरीले जानकारी दिनुभयो । नलगाड जलविद्युत आयोजना, ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना, डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य छिटो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जाजरकोटको कुदुको सवस्टेशन निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ । अन्य ठाउँहरु समाइला, वडावनमा निर्माण हुने सवस्टेशनको जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएपछि अन्य काम शुरु हुने उनको भनाइ छ । दानी पिपलमा निर्माण गर्न लागिएको ४०० केभी प्रसारणलाई सवस्टेशन बनाउन डिपीआरको काम छिट्टै हुने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेसप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । कोरोनाका कारण विज्ञहरु आउन नपाएको भन्दै सिंहले दशैँसम्म काम शुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताए । जाजरकोटका सात स्थानीय तहलगायत अन्य तीन जिल्लामा विद्युत्को प्रसारण लाइन गाउँगाउँमा पुर्याउन सामग्री अभाव हुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।
शुरुमा नेपालगञ्जले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामग्री दिँदै आएकोमा अघिल्लो वर्षदेखि सुर्खेतमै प्रदेश कार्यालय स्थापना भएपछि नेपालगञ्जले सामग्री नदिँदा काममा ढिलाइ भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सुर्खेतमा प्रदेश कार्यालय स्थापनासँगै सामग्री सबै थोक नहुँदा समस्या भएको हो ।
अहिले जाजरकोटको लागि प्रतिमहिना ६० किलोमिटरका लागि मात्र तार दिएको तर माग जाजरकोटमा धेरै भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको विद्युत् प्राविधिकरण जाजरकोट प्रसारण लाइनका प्रमुख लोकबहादुर खड्काले जानकारी दिए । जाजरकोटको सात स्थानीय तहमध्ये बारेकोट गाउँपालिकामा मात्र विद्युत्को प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन । अन्य स्थानीय तहमा लाइन निर्माण गर्ने काम भइरहेको तर कोभिड– १९ का कारण केही समस्या भएको प्रमुख खड्काले जानकारी दिए ।
प्रदेश कार्यालयले पोल जति माग भएपनि दिन सकिने तर तार भनेबमोजिमको दिन नसक्दा जताततै अभाव भएको बताएको छ । विद्युत् प्राविधिकरणलाईनै आपूर्ति गर्ने निकायले सामग्री नै कम दिएको बताइएको छ । दुई वर्षभित्र जाजरकोटलाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेशसभा सदस्य सिंहले बताए ।